547 online! | Sidvisningar idag: 156 913 | Igår: 185 081 |
44 vakafa kungopfura saka kure gore rino kuSweden
Saka kure gore rino pane kwave 44 kungopfura dzinouraya kuSweden. Zvakanyorwa kubva rapera ne 43 akafa ndiye pakurwa.
Church Handbook hunokanganisa ushamwari zvebhaibheri kuti ngochani ukama
Kereke itsva bhuku zvinokanganisa nyaya dzemuBhaibheri kuti zvinosanganisira ungochani zviri chikamu vakaroorana. Ivo vanoti ushamwari pakati paDhavhidhi naJonatani uye Rute naNaome pamusoro ngochani ukama.
tinogona kunzwisisa zviratidzo?
By Mikael Walfridsson By kudzidza zviratidzo zvenguva, tinogona kuva nechokwadi pamusoro, kuti tiri kurarama mune ramangwana kupera. Ko hunhu kuti zvinokosha kuti tizive uye kunzwa nguva tiri kurarama?
Unofunga angatsunga kufunga?
AI - chakagadzirwa njere - kuzadziswa Bhaibheri makore 2000 akapfuura
Zvinonzi ikozvino kuitika panguva breakneck kumhanya ari AI, chakagadzirwa njere (chakagadzirwa njere), uye akatotanga yakatanga kutaura uye kufunga marobhoti. Anonyora kwete ichi unozvidzinga, asi kuti tirege kuona sei kure makore 2,000 apfuura Bhaibheri rakafanotaura rwokugadzira zvave, saka tine kodzero kuratidza nguva!
UN unonyengera chibvumirano akabvumirwa zuro
Photo: Free nguva.
Nezuro akabvumirwa Immigration chibvumirano yeUnited Nations iyo, pfungwa, kuzarura nemiganhu avo vakasununguka immigration. Asi sezvo Nobel pamafundo akunda nezuro yakanyangarika kare kwazvo UN chibvumirano munhau ruzha.
A zvakaratidzwa muchero chokupedzisira muti wokuziva
Izvi zvinganzwika kusuwa, asi ichi ndicho yakasimba Contemporary Time The hunhu tinoverenga nezvazvo muchiratidzo ichi uye muBhaibheri, uye anofanira kuita kuti tive kodzero Interpreting Time!
Reader Mail ne David B Pasina mubvunzo, mapoka vachishevedzera:! Ngaarovererwe, vateveri vaJesu uye kuti Jesu anomirira. Vacharamba tarasikirwa chikonzero chake kuti havasi kuziva zvavari kupfura pachavo vari rutsoka.
Islam akatambanudza achibatsirwa yeChechi Swedish
Christer Åberg anoenda kuburikidza vamwe kukamura uchishandisa nhau. Hapana mubvunzo kuti tiri kurarama mumazuva okupedzisira apo iwe kutora izvi nhau.
anodudzira nezvekuguma kwenyika People
With pamusoro rokuti, mumwe aigona kudana vose avo vanofunga kuti nguva yava pedyo, uye kuti iwe tora zvakaipira payo.
Matenga matatu muBhaibheri
Mundima yokutanga yeBhaibheri inoti iri epakutanga kuti Mwari akasika matenga nenyika. Mwari akasika matenga zvakawanda.
Sweden mari isina mukati matatu kusvika makore mashanu - uprofita hweBhaibheri hwakazadzika
"Sweden zvimwe kuva 'cashless' mukati matatu namashanu", akati Vice Gavhuna Cecilia Skingsley ari rwezvemabhengi musangano muLondon.
Jesu auya uye achauya zvakare
Tiri kumirira chokuuya kwaJesu rwechipiri, kwete wokutanga. Uye kusvika ichi haangavi kwenguva refu. Asi kana Jesu paanodzoka tambo, achava navo chinhu kuti haana nguva kuti akauya wokutanga. Unoziva chii chinogona kuva chinhu?
Kamwe kuponeswa, atoponeswa?
Kalvanistpstorn Pastor John Loopez vakapiwa naJehovha kuona sei dzidziso yenhema iyi.
Nekudengenyeka Alaska - Jesu uprofita huchizadzika
Alaska rave kutsikwa nokudengenyeka zviviri simba chaizvo. Anoenda zvakanaka kana akazivisa njodzi zvaipa. Jesu vanotaura kwenyika makuru kuitika. Ngatinyengetererei kana kutsikwa.
Uprofita yekubvutwa uye Great Mudambudziko
The Bible anoprofita kuti nguva kubvutwa kutora nzvimbo uye vakaponeswa kupinda makamuri apo kutambudzika kuri mberi Panyika.
Anenge avimbisana ane chandelier
Amanda Liberty ari yatsidzira kuti chandelier kuti iye "anoda kutsvoda uye kuvambundira ne."
Christian TV channel kuSweden
Pane zvakawanda zvakanaka Swedish vechiKristu TV mugero kuSweden. Vose vanofamba pamusoro Satellite, waya uye Web! Rinoti zvose migero.
No kuti murima
In rangu ngavasununguke basa kuna Mwari zvino, yave zvinokosha ezvinhu apo muviri wangu mweya yakanga pangozi. Death kutyisidzirwa chiNazi vaNazi nekuti ini ndakasimuka uye akaviga vapoteri, pedyo chaizvo shinda uye sexkriminalitetens rima kuburikidza zvichiongororwa nyaya, besvärjd uye akadenha kuti duel pamusoro occultists pakunamata.
-Makore 69 kusandura nemakore 49
The-makore 69 Emile Ratelband muNetherlands vavekuda zvavo repamutemo zera Hard makore 49.
"Jesu Kristu akandiponesa kubva pamakore 27 ungochani"
uchapupu waDhavhidhi simba sei atanga kuponeswa uye vakaponeswa naJesu makore 27 ungochani. Swedish chinyorwa.
- Ndinonzi David, ndine makore 44 okuberekwa, uye ichi ndicho uchapupu sei Jesu akandiponesa kubva maviri namanomwe ungochani. Ndinotaura rudo.
Troendedöparna ndipiswe, vakanyura uye musoro
Vazhinji ndivo vaya vakatambura kutambudzwa, mujeri uye vakauraya avo vaiita yebhaibheri vatendi-kubhabhatidzwa nokunyudzwa.
Rubhabhatidzo: kupi, kana uye sei
Pano ndinokupai mamwe Magwaro yakajeka pamusoro pakubhabhatidzwa zvaitwa, kana zvoitwa sei.
NdiMwari muBhaibheri yakafanana mwari Koran raMwari?
"Vaya vanoti vanoda, nokukudzwa uye kunamata Mwari, regai chokwadi kuti havadi, kukudzwa uye kunamata Jesu."
Akaroora hologram Hatsune Miku
Akihiko Kondo akabata chidzoyi shanduro hologram Yue ani akaroora. Image Source: Facebook.
A-makore 35 murume kuJapan vakawana imwe hologrom. Muchato arasikirwe 160,000 korona. A mudhori rinomirira chirongwa kombiyuta munhukadzi.
Heaven TV7 vagadzwe Uppsala
TV mugadziri Ruben Agnarsson, muvambi uye mutungamiriri Martti Ojares, gwara maneja Daniela Persin uye Christer Åberg.
Ndakakokwa yechiKristu paterevhizheni chiteshi Heaven TV7 Studio yokutanga muna Uppsala.
Jesu katatu nyika-risingakanganwiki kukunda
Jesu katatu nyika-munhau kukunda, chipo chaMwari kune vose vanhu venyika. Jesu Kristu akaita kuburikidza Rudzikinuro aiva kumboonekwa Triple Victory! Dambudziko raiva 3 munzvimbo dzakasiyana kuti iye pamberi paMwari mukuru mutongi uye napamberi: The Mudzimu wenyika anofanira kuhwina.
Flat ivhu riri mumagwaro
Kana ukaverenga Bhaibheri, unogona kuona zvakajeka kuti pasi rakatenderera. Kana nyika haisi kumativi Jesu yaizodai kwazvo kururama paanoti kuti masikati nousiku Panyika, kana iye kuuya kumba vose vakaponeswa kudenga.
New DVD! Mibvunzo nemhinduro nezvokuguma nguva nezviitiko zvayo
Zvino vane mukana kutora chikamu DVD idzva iri pamusoro mugumo-nguva zviitiko.
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 458 490 604 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 059 bloggartiklar, 92 305 kommentarer och 60 506 bönämnen.